के तपाई केश झरेर हैउरान हुनुहुन्छ?केश झर्न रोक्ने घरेलु उपचार ! - VON TV
के तपाई केश झरेर हैउरान हुनुहुन्छ?केश झर्न रोक्ने घरेलु उपचार !
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार १८:१८ 70 ??? ???????
– केश झर्ने समस्याले धेरैलाई सताएको पाइन्छ । व्यस्त प्रोफेसनलहरूका लागि पार्लर गएर ट्रिटमेन्ट गराउने समय नहुन सक्छ ।
– मह, ओलिभ आयल तथा दालचिनीको धूलो मिसाइएको पेस्ट हप्तामा दुईपटक लगाउने । यो पेस्टलाई १५ मिनेट राखेपछि सफा पानीले पखाल्ने । यसले केश बढाउन समेत मद्दत गर्छ ।
– सुख्खा मेहन्दीको पातलाई तोरी, बदाम तथा नरिवलको तेलमा भिजाउने । त्यसलाई मखमलीको सफा कपडामा राखेर छान्ने । त्यही मनतातो तेलद्वारा हेयर मसाज गर्ने । यसले चायाँको समस्या समाधान गर्नुका साथै केश झर्नसमेत रोक्छ ।
– मेथीको पेस्ट टाउकोमा लगाउँदा केश जरैदेखि बलियो हुन्छ ।
– प्याजको जुसले केशको जरामा मसाज गर्दा केश बलियो हुन्छ भने अण्डाको सेतो भागमा ओनियन जुस मिसाइएको पेस्ट लगाई १५ देखि २० मिनेट छोडेर चिसो पानीले केश पखाल्ने । यसले केश मुलायम एवं चम्किलो बनाउनुका साथै केशलाई भित्रैदेखि मजबुत बनाउँछ ।
बिरामी हुँदा प्रिय मान्छेले हात समाए ‘पेनकिलर’ले बराबर काम गर्छ
यस्ता छन् सुखी दाम्पत्य जीवनका सुत्रहरु !
चिन्तित भएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ३ तरिका अपनाएर तत्कालै हुनुहोस् चिन्तामुक्त !
श्रीमानले बुझ्नुपर्ने यी कुराहरु,जसले पति–पत्नीको सम्बन्ध कसिलो बनाउँछ
मानव शरीरसम्बन्धी यी आठ कुरा झुटा हुन्, के हो सत्य ?
झुटो बोल्ने बच्चा पछि गएर धेरै बाठो हुने अध्ययनको निष्कर्ष !